बिक्री र सेवा - Jiangyin Unite शीर्ष भारी उद्योग कं, लिमिटेड।
(१) रिसाइक्लिंग मेसिनरी र समाधानका लागि म्यानुअल:
Unite Top Machinery ले आफूले बनाएको प्रत्येक मेसिनको लागि स्पष्ट म्यानुअल प्रदान गर्दछ, किनभने हामी पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने, भरपर्दो रिसाइक्लिङ्ग मेसिनको महत्त्व बुझ्छौं।
हाम्रा रिसाइक्लिङ्ग मेसिन म्यानुअलहरू तपाईंका सबै कर्मचारीहरूका लागि बुझ्न सजिलो हुने तरिकाले लेखिएका र संरचित छन्। यी विस्तृत म्यानुअलहरूमा रिसाइक्लिङ्ग मेसिनहरूको सही प्रयोगलाई चित्रण गर्ने धेरै फोटोहरू र रेखाचित्रहरू समावेश छन्। यदि तपाइँसँग म्यानुअलको सामग्रीको बारेमा प्रश्नहरू छन्? कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। किनभने हामी UNITE TOP MACHINERY मा सामान सेवा प्रस्ताव गर्ने हाम्रो क्षमतामा गर्व गर्छौं।
(२) रिसाइक्लिंग उपकरणको मर्मत:
युनाइट शीर्ष मेसिनरीले तपाइँका सबै रिसाइक्लिंग मेसिनहरूको लागि पूर्ण सेवा प्रदान गर्दछ। हाम्रो अनुभवी मर्मत प्राविधिकहरू स्थापना, मर्मत, नवीकरण, मर्मत र तपाईंको रिसाइक्लिंग मेसिनको स्पेयर पार्ट्सको डेलिभरीमा विशेषज्ञ।
रिसाइक्लिंग मेसिनहरूको लागि एकताबद्ध शीर्ष मेसिनरी सेवा चीन र विदेशमा फैलिएको छ। हाम्रा प्राविधिकहरूसँग उनीहरूको निपटानमा पूर्ण रूपमा सुसज्जित सेवा भ्यान छ। विदेशी ग्राहकहरु को लागी, तिनीहरू पनि आफ्नो निपटान मा तपाइँको साइट को लागी तयार छन्। तिनीहरू साइटमा आइपुगेपछि, तिनीहरूले तपाईंको रिसाइक्लिंग मेसिनको साथ समस्या समाधान गर्न तुरुन्तै काम सुरु गर्न सक्छन्।
हामी हाम्रो गोदाममा सबै आवश्यक उपकरणहरू र प्रायः आवश्यक पर्ने भागहरू तयार छौं। हाम्रो उद्देश्य हाम्रो कुल सेवा अवधारणा अनुरूप तपाईं सबै सरोकारहरूबाट मुक्त गर्नु हो।
(३) तपाईंको रिसाइक्लिंग मेसिनरीका पार्टपुर्जाहरूको डेलिभरी:
साना कम्पोनेन्टहरू जस्तै सामान्यतया प्रयोग गरिने सिलहरू हाम्रो सेवा भ्यानहरूमा मानक प्राविधिक सूचीको अंश हुन्। प्रमुख मेसिन कम्पोनेन्टहरू प्रतिस्थापन हाम्रो आफ्नै कारखानामा गर्न आवश्यक हुन सक्छ। युनाइट शीर्ष मेसिनरीले विश्वको कुनै पनि स्थानमा रिसाइक्लिंग मेसिनहरूको लागि भागहरू प्रदान गर्दछ। किनभने हामी राम्रो रिसाइक्लिंग मेसिन प्रदर्शनको महत्त्व बुझ्छौं। के तपाइँ तपाइँको रिसाइक्लिंग मेसिन को लागी सही भागहरु को बारे मा सल्लाह को आवश्यकता छ? कृपया हाम्रो एक विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईका रिसाइक्लिङ्ग मेसिनहरूलाई इष्टतम अवस्थामा राख्नको लागि आवश्यक पर्ने भागहरूको बारेमा सल्लाह दिन हामी खुसी हुनेछौं।
(४) रिसाइक्लिङ मेसिन सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रमहरू:
युनाइट शीर्ष मेसिनरीले तपाइँका कर्मचारीहरूको लागि उद्देश्य-डिजाइन गरिएको प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ। तपाइँको रिसाइक्लिंग मेशिन को प्रयोग मा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तपाइँको साइट वा हाम्रो सुविधा मा आयोजित गर्न सकिन्छ। तपाईंको रिसाइक्लिंग मेसिनको अधिकतम प्रयोगको ग्यारेन्टी गर्नको लागि। Unite Top Machinery ले हाम्रा रिसाइक्लिङ मेसिनहरू जस्तै उच्च गुणस्तरको प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ।
सबै युनाइट शीर्ष रिसाइकिलिंग मेसिनरी सञ्चालन गर्न सजिलो छ। युनाइट टप मेसिनरी कोर्सको बखत हाम्रा प्राविधिकहरूले तपाईंलाई मेसिनको सबै इन्स र आउटहरूसँग परिचित गराउँछन्। तालिममा सुरक्षा, सेवा र मर्मतसम्भार जस्ता विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।
स्क्र्याप मेटल कम्प्याक्टर, एल्युमिनियम पन्नी बेलर मेसिन, पात कम्प्याक्टर र बेलर, Y81 हाइड्रोलिक बेलर, पप-शीर्ष क्यान बेलर उपकरण, घरेलु गत्ता बेलर,